Somali News 11.17.21
Published November 18, 2021 at 10:38 AM CST
Xogta gobolku waxay tusinaysaa cusbitaallada la seexiyo, dadka ku jira daryeelka degdegga ah, iyo dhimashada COVID-19 ayaa dhammaantood ka taagan Iowa, oo ay ku jiraan gudaha.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa sheegtay in 544 qof ay ku jiraan cusbitaalka COVID-19, oo ay ku jiraan 123 ku jira daryeelka degdegga ah.
Waxaa jiray koror 30% ah bukaannada Sioux City ee la dagaallamaya COVID-19 kaliya, iyadoo 25 qof la dhigay isbitaal.
Warbixintii ugu dambaysay ayaa intaa ku dartay 102 dhimasho ah, kuwaas oo uu gobolku sheegay in ay dhaceen intii u dhaxaysay Sebtembar 15 iyo Noofambar 11. Waxaa jiray laba dhimasho oo kale oo lagu daray usbuucan la soo dhaafay degmada Woodbury 254.
Gobolka ayaa hadda soo sheegaya 7,268 dhimasho tan iyo markii uu cudurku bilaabmay.
Inta badan dadka reer Iowa waxa ay sheegeen in ay ogolaadeen shaqada Gov. Iowa Kim Reynolds uu qabanayo marka ay gasho sanadka doorashada 2022. Taasi waa marka loo eego Diiwaanka cusub ee Des Moines/Mediacom Iowa Poll.
In ka badan kala bar dadka reer Iowan ayaa sidoo kale oggolaaday sida Reynolds uu ula tacaalayo saddex arrimood oo muhiim ah: Faafida COVID-19, dhaqaalaha, iyo waxbarashada.
Taageerada waxa loo qaybiyaa khadadka xisbiyada.
Cudurka wadnaha ayaa ah dilaaga ugu sarreeya ee haweenka Iowa waxayna khubaradu sheegeen in walwalka joogtada ah ee masiibada uu ka dhigayo cudurka xitaa mid aad u dilaa ah.
Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in ragga laga yaabo inay ku dhacaan "wadna xanuunka Hollywood" ee laabta ku dheggan, calaamadaha wadno-qabadka ee dumarku way ka duwan yihiin waxayna badanaa aad u khiyaamo badan yihiin, oo ay ku jiraan daanka xanuun, lallabbo, dheef-shiid kiimikaad, daal, dawakhaad, dhidid kulul. iyo neefta oo yaraata.
Iowa ayaa ku jirta kaalinta 19aad ee U-S dhimashada cudurada wadnaha